Mividiana otrikaina C & Hyaluronic Acid Anti Aging & Wrinkle Moisturizing Face Serum - Fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
$11.99 Regular vidiny $15.99
Vitaminina C & Hyaluronic Acid Anti Aging & Wrinkle Moisturizing Face Serum tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Ingredient: Vitaminina c, asidra hyaluronic, zavamaniry voajanahary
Karazana: serum peptides serum vitamina ho an'ny tarehy
Laharana fanamarinana: 42345436754
Karazana: serum vitaminina serum amin'ny tarehy anti-ketrona
Endri-javatra: Anti-Aging moisturizing Skin Care Whitening hamirapiratra, mafy orina tarehy serum tarehy
Vokany: Malazo manala ny eson-koditra manify Winkles, manamafy ny hoditra
Function: mampiakatra tarehy Fanaraha-maso menaka, mamelona hamandoana malama, serum mamirapiratra mamelombelona
Vokany: menaka famonoana menaka tarehy, famenony ary vitamina c serum ho an'ny lehilahy sy vehivavy
Ampiasao: Famenony sy vitamina c serum tarehy
Toro-lalana: asio 3-5 latsaka indray mandeha isan'andro araraka amin'ny moisturizer. Ho an'ny fampiasana ivelany ihany.
Akora ilaina: manankarena vitamina, asidra Hyaluronic, menaka jojoba, alove, Deionized Herbal Infusion.
Ny asidra hyaluronic mifototra amin'ny zavamaniry dia mamelombelona ny sela hoditra,
Nohamafisina tamin'ny Vitaminina C & Vitamina E hanampiana totohondry anti-anti-fahanterana 1-2 mahery
Ny akora voajanahary matanjaka sy mahomby dia mandray haingana nefa tsy manentsina ny mason-koditra, manaitaitra ny hoditra marefo, na mamela io reside miraikitra izay ataon'ny serum hafa.
Manampy amin'ny fampihenana ny ketrona: manatsara ny endrik-koditry ny hoditra, ary manjavona ny holatra / mamontsina ny mony
Antioxidant Overload: Ny vitamina C dia manome ny antioxidantana amin'ny hoditrao ilainy mba hiarovany tena amin'ireo vokan'ny fahanteran'ny mpampihorohoro tsy hita toa ny fandotoana sy ny taratra UV manimba izay mitazona anao tsy hahatratra ny taratrao mahasalama.
Hoditra mamirapiratra sy tanora: Azo antoka ny hamelana ny hoditrao sy hanana endrika tanora kokoa, amin'ny alàlan'ny fanalefahana ireo radikaly afaka.
Miorina amin'ny fanavaozana 64
Ny vokatra tsara, tonga tsara ny fepetra dia ny habetsany voalaza fa ny fotoana fandefasana lava loatra efa ho 2 volana izao
Tsy nahita na inona na inona tamin'ny hoditra aho. Toy ny mametraka rano aho, matevina kely kokoa.
Ny mpividy dia mandresy antsika 4.9 / 5 miorina amin'ny fanamarihana 118845.
Kaosy baoty landy tsy misy silipo ho an'ny vehivavy